Inona ny fiantraikany sy ny fomba hafa amin'ny fanakanana doka? | Martech Zone
Ny mahatsapa ny Internet nefa tsy manelingelina anao isaky ny fotoana fohy ny dokambarotra dia toa mahafinaritra. Mampalahelo fa tsia. Amin'ny alàlan'ny fanakanana doka marobe, ny mpanjifa dia manery ny mpanonta hanao hetsika henjana. Ary rehefa iOS 9 mamela ny fanitarana finday finday Safari amin'ny iPhone, fanitarana fanakanana doka niainga teny an-tsena ho an'ireo mpampiasa finday - fitaovana fampitomboana doka avo lenta.
Ny tombatombana iray dia milaza fa very $ 1.86 miliara amin'ny fidiram-bolan'i Etazonia i Etazonia noho ny fanakanana ny doka tamin'ny taona 2014. Ny mpamoaka boky dia efa namoy tombam-bidiny 9% amin'ny fidiram-bolan'ny fanakanana doka.
Ity infographic avy amin'ny Signal, Ny fiakaran'ny mpanakan-doka, manome fomba telo hanandramana hitazomana ny vola miditra amin'ny doka:
Fifanarahana doka - Ny fiaraha-miasa amin'ireo tamba-jotra doka izay tsy mampiditra angon-drakitra marina dia mety hamokatra doka tsy misy ifandraisany izay handroahana ny mpanjifa ary hamporisika azy ireo hampiasa ireo mpanakana doka.
Personalization - ampidiro ny fantsonao rehetra hahazoana antoka fa ho fantatra tsara ny mpanjifa sy ny mpanjifa.
Doka ara-nofo - Mamporisika ireo mpitory hampiditra ny Signal teratany dokam-barotra hampitombo ny vola miditra.
Na dia safidy tsara ho an'ny mpanonta aza ny safidy roa voalohany, ny safidy hitadiavana dokam-barotra zanatany dia mahatonga ahy ho sadaikatra. Ny zavatra tsara momba ny doka dia tsy diso izy ireo. Dokam-barotra zanatany; etsy ankilany, diso hevitra mora foana amin'ny atiny. Ny mpanonta dia tsy maintsy manao zavatra raha te ho tafavoaka velona izy ireo, saingy tsy mety amiko raha manosika azy ireo hiditra amin'ity zoro ity ny mpanjifa.
Olona 200 tapitrisa izao no mampiasa rindrambaiko manakana ny doka, fitomboana 41% manerantany amin'ny taona lasa.
Tags: vola miditra amin'ny dokaad-fanakananaAdobefidiram-bola amin'ny dokam-barotradoka googlegoogle adwordspejyfairsingal